"1 Dia namaly Joba ka nanao hoe: 2 Mbola atao ho fikomiana ihany ny fitarainako; Ny tànana mamely ahy dia mitambesatra amin’ny fisentoako. 3 Enga anie ka ho fantatro izay hahitako Azy ka ho tonga any amin’ny fitoerany aza! 4 Dia handahatra ny teniko eo anatrehany aho. Ka hofenoiko ny teny alahatro ny vavako; 5 Ary hahalala izay teny havaliny ahy aho sy hamantatra izay holazainy amiko. 6 Hery lehibe va no handaharany teny amiko? Tsia, fa Izy indrindra no hihaino ahy. 7 Fa amin’ izany dia olona marina no ho nifandahatra taminy; Ka dia ho nanan-drariny mihitsy aho tamin’ ny Mpitsara ahy. 8 Indro, miantsinanana aho, fa tsy any Izy; Ary miankandrefana aho, fa tsy hitako Izy; 9 Mianavaratra amin’izay iasany aho, fa tsy tazako Izy; Mivily any atsimo Izy, ka tsy hitako. 10 Fa mahalala ny làlana falehako Izy; Raha hizahany toetra aho, dia hivoaka tahaka ny volamena. 11 Ny tongotro nifikitra tamin’ ny làlany; Eny, ny làlany no nizorako tsara, ka tsy nivily aho. 12 Ny didin’ny molony tsy mba nialako; Ny tenin’ ny vavany noraketiko mihoatra noho ny faniriako. 13 Nefa tsy miova saina Izy, iza no mahasakana Azy? Fa na inona na inona irin’ny fanahiny dia ataony. 14 Eny, manatanteraka izay voatendry ho ahy Izy; Ary zavatra maro toy izany no ao aminy; 15 Koa izany no mampangovitra ahy eo anatrehany; Raha misaintsaina izany aho, dia matahotra Azy. 16 Fa Andriamanitra no mandreraka ny foko, Ary ny Tsitoha no mampangovitra ahy; 17 Fa tsy ny fahamaizinana no maharesy ahy, Na ny maizim-pito izay manarona ny tavako.." Joba 23:1-17
“Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy " (Ohabolana 15:1). Nihamasiaka hatrany ny hafatr’i Elifaza ho an’i Joba izay azo fintinina hoe “aoka izay io kabary lavareny io fa mibebaha ianao ry Joba dia hiverina amin’ny laoniny ny fiainanao !”. Ny valintenin’i Joba kosa eto dia tsapa fa miha-malefaka, mihena kely ny fanamarinan-tena fa naleony milaza izay fantany momba an’Andriamanitra izay hany afaka manambara aminy marina ny anton’ny fahoriany.
Fanontaniana: Ahoana no hamaliako ireny fitenenana masiaka amiko ireny?
Iza moa Andriamanitra aminy? Andriamanitra azony ifandaharana (4,5); ilay Mpitsara marina azy na tsy misy tsiny aza izy (6-7), tahaka ny lazain’i Paoly hoe “fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany, fa ny Tompo no mpitsara ahy” (1 Korintianina 4:4).
Andriamanitra miafina (8, 9). Hoy koa Isaia hoe “Marina tokoa fa Ianao dia Andriamanitra miafina” (Isaia 45:15). Andriamanitra mahafantatra tsara azy, indrindra ny maha-olo-marina azy (10-12). Andriamanitra masimandidy sy mahatanteraka ny planina ho azy (13-14).
Mitarika inona amiko ny fahafantarako ny momba an’Andriamanitra? Miisa dimy ny toetran’Andriamanitra fantar’i Joba. Noho ireo toetra ireo no mahatonga fahatahorana miabo eo aminy, izany hoe fahatahorana an’Andriamanitra mahatonga fanatonana Azy bebe kokoa. Ny atao hoe fahatahorana miiba kosa dia ilay tahotra mahatonga ny olona handositra an’Andriamanitra tahaka an’i Adama; “Nandre anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria nitanjaka ka dia niery” (Genesisy 3:9). Raha fintinina dia ny fahalalako an’Andriamanitra mitarika fahatahorako Azy ary mitarika fandresena amin’ny ady.